Indlu yasefama yale mihla yaphakathi kwi-w/pool!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDave'S Vineyard House
Le ndlu yaphakathi kwinkulungwane yonyulwe ngendlela yale mihla ekufuphi namakhulu eehektare zengqolowa eqengqelekayo kunye nesidiliya, kodwa luhambo olufutshane ukuya kwidolophu yaseWalla Walla eyimbali.
Ikhaya linendawo yokuhlangana yeqela elikhulu, indawo yokuhlala, igumbi lokutyela kunye neendawo ezingaphandle zokuzonwabisa. Inekhitshi yokutya ngaphandle, igrill yegesi kunye nephuli.
Ifakwe phakathi kwamasimi engqolowa kumbindi welizwe lewayini laseWashington, 'Indlu yeVineyard' yindlela emfutshane yokuqhuba kwiSitrato esiyimbali saseWalla Walla esimakwe kumhlaba, amagumbi ayo okungcamla iwayini kunye neendawo zokutyela ezibalaseleyo, kunye nekhampasi yaseWhitman College.
Indawo enkulu evulekileyo inika imvakalelo yokuzola kunye nentuthuzelo. Ukusuka kwiqula elisemhlabeni, iindwendwe zinokonwabela umbono weBlue Mountains ukuya empuma kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo entshona.
Ikhaya linesauna eyomileyo yomsedare, amagumbi okulala ama-5 akhoyo, aquka igumbi labucala kwisakhiwo esahlukileyo kwindlu enkulu. Iyakwazi ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezili-10. Ngeli xesha, asibavumeli abantwana ukuba bahlale.
IVineyard House inomgcini-mhlaba okwisiza kwindawo yokuhlala eyahlukileyo.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo.
4.76 ·Izimvo eziyi-37
Isetingi ivalelwe kodwa yimizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya edolophini eWalla Walla.
Umbuki zindwendwe ngu- Dave'S Vineyard House
Ndikhona ukuze ndibulise iindwendwe zam kwaye ndibonise indawo yazo kodwa ndiza kubashiya bonwabele indawo yabucala xa sele bekhululekile.